နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: May 2011
ဘဝမှာ အရေးပါမှုတစ်ခုတော့ ရှိသင့်ရဲ့
ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာမျိုး
အများလည်း လက်ခံတဲ့ အရာမျိုး
ကဲ ပြောတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊
ဒါကို ဘယ်သူ သတ်မှတ်ပေးမလဲ။
မင်းရဲ့ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေရေး
မင်း တန်ဖိုးထားပြီး ပျော်နေရဲ့လား၊
ခံစားမှုတွေ မျှဝေဖို့ အချိန်ရှိရဲ့လား၊
ဝါသနာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလည်း ရှားပါး
လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာ
ငါ့ကိုယ်ငါပဲ မေးမေး နေတာပါ
ဘာကြောင့် ရအောင် မလုပ်နိုင်သလဲ
ပိုင်းဖြတ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုသာ ရှိပါစေပေါ့။
မင်းဆီကို ရောက်အောင်လာမှာ အသေချာ။
တစ်နေ့တာက မင်းကို ခေါ်နေပြီ
ဒီထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။
မင်း ကိုယ်ပေါ် ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့
ဝမ်းနည်းမှု၊ ညနဲ့ အမှောင်ထု
အဲဒီကြားက တိုးထွက်လာတဲ့ ရေသောက်မြစ်
အရုဏ်ရဲ့ အလင်းကို ငံ့လင့်နေ..။
သန့်စင်တဲ့ အပျိုစင်ရဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာလို
မင်းရဲ့ သတ္တုလို ခန္ဓာကို စမ်းသပ်လိုက်..
မင်းရဲ့ သွေးက ပြောလိမ့်မယ်
မင်း ပါးပြင်ရဲ့ အသွေးအရောင်က
မင်းဘဝကို မြင့်မြင့်မားမား ပို့ဆောင်ဖို့
ဒါကိုပဲ အားကြီးကြီးနဲ့ ပစ်လွှတ်လိုက်
တိမ်တွေဆီ ရောက်မယ့် အသံတစ်ခုလိုမျိုးလေ။
ဒါ ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးသား ကံကြမ္မာပဲ
မင်း အလုပ်က မင်းပဲ
ဒါထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။
Wake Up. Day calls you by Pedro Salinas (1891-1951)
English translation by Willis Barnstone
မင်း နှင်းဆီတွေကို ချစ်တယ်နော်
နှင်းဆီ ခြုံကို လှုပ်ခါ ချလိုက်သလို
ပန်းရောင် နဲ့ အဖြူရောင်တွေ ဖုံးလွှမ်း
အဲဒီအပေါ် ဖွဖွလေး နင်းလျှောက်..
ငှက်တောင်မွှေးတွေလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွင့်ကျ
ချိုမြမြ မွှေးရနံ့ တွေနဲ့..
Roses by George Eliot (1819-1880)
10 comments Labels: တစ္ဆေပုံပြင်
သံသယတွေ အစီအရီ သီကုံးထားတဲ့
အဲဒီ လိုက်ကာစကိုပဲ အမြဲ ချရင်း
လေစိမ်း တစ်ချက် ဝင်ရင်တောင်မှ
အဆိပ်ငွေ့တွေလို့ ထင်ချင်သေးရဲ့.. ။
မယုံကြည်နိုင်မှုတွေ များလာရာက မြစ်ဖျားခံခဲ့တာပါ၊
ကိုယ့်ဟာကိုယ် စွဲချက်တွေ တင် တင်ပြီး
ကိုယ့်ဟာကိုယ် သက်သေ ပြ ပြနေသူပေါ့..။
ဒေါသ သစ်သီးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေပါရော..။
ဈေးကြီး ပေးပြီး ဝယ်မိတာကလည်း
သံသယ လိုက်ကာကြားက ထွက်ပြီး
မောဟ ဖျော်ရည်တွေ သောက်သောက်နေရင်း
မကြည်လင်တဲ့ အမြင်ကိုမှ အမှန်လို့ ထင်ချင်နေပြီး
ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ် မွန်းကျပ်၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ပိတ်လှောင် ထားသူရယ်ပေါ့..။